Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂီတဖွင့်စက်များ Androidsis
ဟိုဆေး Alfocea | | Android application များ, အခမဲ့ဂီတ
ယခုစနေ၊ တနင်္ဂနွေသို့နီးကပ်လာသည် (လာပါ၊ သောကြာနေ့ပြီးပြီဆိုလျှင်မိနစ်နှင့်နာရီအနည်းငယ်သာကြာပါပြီ), သင်စူးစမ်းချင်သောကြောင့်၎င်း, \_ t သင်၏ Android စမတ်ဖုန်းအတွက်ဂီတဖွင့်စက်ကောင်းတစ်ခုရှာပါ သင်၏အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများနှင့်အနုပညာရှင်များနှင့်အတူဤကောင်းမွန်သောအချိန်ကိုရရှိရန်ထွက်ခွာသွားရန်အထူးသဖြင့်သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖြစ်ရပ်ကဲ့သို့သော terminal ကိုထုတ်ရုံသာလျှင်ကျွန်ုပ်သည်အံ့အားသင့်စရာကောင်းသော Xiaomi Redmi Note4ကိုစူးစမ်းလေ့လာနေသည်။
သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင်ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်း၊ ဂူဂဲလ်ပလေးသို့မဟုတ်နှစ်မျိုးစလုံးပါ ၀ င်နိုင်သောစံပြဂီတဖွင့်စက်နှင့်ပါပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ယေဘူယျ MIUI 8 နှင့် Play Music သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာများမဆိုရှိနိုင်သည်။ Play Store တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကျန်ရှိနေသေးသောမည်သည့်အရာကိုကြည့်ရှုရန်အနည်းငယ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါနဲ့မင်းရွေးစရာတစ်ခုယူလာခဲ့တာ Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂီတဖွင့်စက်အချို့နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်အကြံဥာဏ်များရှိပါကမှတ်ချက်များထဲတွင်၎င်းတို့အားအောက်တွင်ထားခဲ့ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်အလွန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။ အဲ့ဒီနေရာကိုသွားရအောင်!
1 Google ဂီတ Play
2 Shuttle ဂီတဖွင့်စက်
5 Pulsar ဂီတဖွင့်စက်
6 BlackPlayer ဂီတဖွင့်စက်
Google ဂီတ Play
အားလုံးရဲ့အထင်ရှားဆုံးရွေးစရာနဲ့ငါစမယ်။ သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူမလာဘူးဆိုရင် Google ဂီတ Play သင်က Play Store မှာရနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာအကောင်းဆုံးလို့မဟုတ်ပါဘူး။ ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ယူခြင်းကိုဖယ်ထားခြင်း၊ ဤအက်ပလီကေးရှင်းတွင်ဒေသခံတေးဂီတဖွင့်စက်နှင့်ပြproblemနာကြီးသည်သင်တိုက်ရိုက်ရှာဖွေနိုင်သော်လည်းသင်၏အယ်လ်ဘမ်ကိုအယ်လ်ဘမ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ သံသယမရှိဘဲအကောင်းဆုံးမှာ၎င်း၏တောက်ပသောအရောင်များနှင့်စင်ကြယ်သောပစ္စည်းများဒီဇိုင်းနှင့်အတူဖြစ်သည်။
ရေးသားသူ: Google က LLC
“ မဖြစ်မနေ” နီးပါးရွေးစရာကိုမြင်တွေ့ရပြီးတဲ့အခါငါတို့ဆီရောက်လာတယ် Shuttle ဂီတဖွင့်စက်Android အတွက်နောက်ထပ်အခမဲ့သီချင်းဖွင့်စက် အလွန်အမြင်အာရုံနှင့်ရောင်စုံ, «အလွန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်း»နှင့်လည်းအနည်းငယ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန် themes များ (ကြွင်းသောအရာသည်ပေးဆောင်ထားသောဗားရှင်း၌ရှိသည်) ။
လွန်း ဒါကဂီတဖွင့်စက်ပဲ အလွန်အလင်း အရာလည်းအလွန်အရည်လမ်းနှင့်ပင်အလုပ်လုပ်တယ် MusiXmatch နှင့် တွဲဖက်၍ သီချင်းများ၏စာသားများကိုပြသည် (ငါတို့ယခုလည်းစကားပြောပါလိမ့်မယ်) ။ သင်၏ဂီတစာကြည့်တိုက်ကိုရှာဖွေလိုပါကအနုပညာရှင်များ၊ အယ်လ်ဘမ်များ၊ သီချင်းများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Chromecast အထောက်အပံ့ကိုလည်းပေးထားတယ်။ အဖုံးများအလိုအလျောက် download, timer နေရာမှာ, ဝစ်ဂျက်များနှင့်ပိုပြီး။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါတို့အရင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း Musixmatch သည်ထူးခြားသောလက္ခဏာများကြောင့်အချိန်ကုန်ခံမှုကိုခံရပ်နိုင်သည့်ဂီတဖွင့်စက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသီချင်းများ၏စာသားကိုပေးထားပါတယ် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် streaming ဂီတဝန်ဆောင်မှုများ (Play Music, Spotify ... ) တွင်ပါ။
အောက်ပါဖန်သားပြင်တွင်သင်တွေ့နိုင်သည့်အတိုင်းအတူတူလိုက်နာပါ ပစ္စည်းဒီဇိုင်း ယခင်အသုံးချပရိုဂရမ်များမှကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသောကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့်တက်ကြွသောအရောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့တေးသီချင်း၊ အယ်လ်ဘမ်၊ အနုပညာရှင်များ၊ အမျိုးအစား၊ သီချင်းများ၊
Musixmatch - သီချင်းဖွင့်သီချင်း Lyrics
ဓာတ်စက်ဂီတဖွင့်စက် Android အတွက်တေးဂီတဖွင့်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သင်လိုချင်သောအရောင်နှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၏သင်တန်းကပစ္စည်းဒီဇိုင်း, အလင်းနှင့်တစ် ဦး နှင့်အတူသစ္စာဖြစ်ပါတယ် သီချင်းများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ ဖွင့်စာရင်းများ၊ အယ်လ်ဘမ်များနှင့်ဖိုင်တွဲများမှကြည့်ရှုခြင်းများဖြင့်အလွန်ချောမွေ့ပြီးဂန္ထဝင်လမ်းညွှန်မှုရှိသည်.
ထို့အပြင်လည်းကမ်းလှမ်း အဖုံးများနှင့်အတ္ထုပ္ပတ္တိများ၏အလိုအလျှောက်ဒေါင်းလုပ်, Last.fm ပေါင်းစည်းမှုနှင့်ပိုပြီး။
ရေးသားသူ: Karim abou zeid
Pulsar ဒါဟာနောက်ထပ်အကြီးအပိုင့်ရှိပါတယ်။ ပစ္စည်းဒီဇိုင်းအတွက်မှန်ကန်သော, အလင်းအသုံးပြုရန်လွယ်ကူ၊ ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော၊ Last.fm နှင့်ထပ်တူပြုခြင်း၊ အဖုံးများအလိုအလျောက် download, timer, Chromecast ကိုအတူပေါင်းစည်း ... ဒါဟာအစကွဲပြားခြားနားသောကမ်းလှမ်းခဲ့သည် အယ်လ်ဘမ်, အနုပညာရှင်, folder နဲ့အမျိုးအစားအားဖြင့်အမြင်များ, သင်ပိုမိုလွယ်ကူသင်အကြိုက်ဆုံးဂီတခံစားရန်။
Pulsar ဂီတဖွင့်စက် - Pulsar ဂီတဖွင့်စက်
ရေးသားသူ: ရစ်သမ် Software များ
ငါတို့နှင့်အတူအဆုံးသတ် BlackPlayer ရိုးရှင်းပြီးရိုးရှင်းသော၊ ရိုးရှင်းသော interface ရှိသော်လည်းအခြားအရာများဖြင့် Android အတွက်အခြားအခမဲ့သီချင်းဖွင့်စက် စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်စရာများစွာရှိသည် အသွင်ကူးပြောင်းမှု, themes များနှင့်ပိုပြီးတူသော။ ၎င်းတွင်သင်၌ကိုယ်ပိုင်သီချင်းစာရင်းများဖန်တီးနိုင်သည် display mode လေးခု (သီချင်းများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ အယ်လ်ဘမ်များနှင့်အမျိုးအစားများ)သင်၏လက်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြင့်ရွေ့လျားနိုင်သည်။
၎င်းသည် Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂီတဖွင့်စက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Play Store တွင်ရွေးချယ်စရာများပြည့်နှက်နေသဖြင့်ပထမအကြိမ်မှန်ကန်စွာရရန်ခက်ခဲသည်၊ မည်သည့်တစ်ခုကိုသင်အသုံးပြုသနည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂီတဖွင့်စက်များ
သူတို့ကတစ်ခုသာကစားသမားကင်းမဲ့လျက်, ၎င်းတို့တွင် Android အတွက်အကောင်းဆုံးတေးဂီတဖွင့်စက်ကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ သူတို့မှာ Power Amp မရှိဘူး။
Galaxy S8 အသစ်သည်မည်မျှခက်ခဲသနည်း။
Telefónica, Vodafone နှင့် BBVA တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်